Manchester United oo sii adkeysatay hanashada koobka Premier League-ga | raascasayrmedia.com
← Madaxweynaha dalka Jabuuti oo markii saddexaad loo dhaariyay xilka madaxweynenimo ee dalkaas
Boosaaso:Wasiirka Aminga Puntland”Ssc,Raascasayr State Puntland Kama Tirsana” →
May 9, 2011 · 1:10 am
Manchester United oo sii adkeysatay hanashada koobka Premier League-ga
Kooxda shayaadiinta cas-cas ee Manchester United ayaa sii xajisatay hanashada koobka horyaalka dalka Ingiriiska kadib markii ay 2-1 ugu awood sheegatay kooxda Chelsea.
Ciyaartan oo si weyn loo wada sugayey ayaa meesha ka saartay rajadii kooxda Libaaxyada mad-madow ee Chelsea ay ka qabtay hanashada koobka horyaalka,iyadoo taasina muujineysa in kooxda Man. United ay ku guuleysan karta koobka horyaalka,maadaama ay u harsantahay laba ciyaar oo qabow.
Javier Hernindez ayaa daqiiqadi ugu horeysay ee ciyaarta ku bilaabay gool,isagoo u dhaliyey kooxdisa Manchester,markii uu si qaldan ay lugta uga dhacday daafaca dhawaan ay keensatay Chelsea ee David Luiz.
Kabtan Nemanja Vidic ayaa u dhaliyey goolkii labaad ee kooxda Man.United daqiiqadii 23-aad ,halka kooxda Chelsea iyana goolkii qura ee ay keensatay uu u saxiixay kabtan ku xigeenka kooxdaasi Frank Lampard.
Kooxda caanka ah ee Manchester United ayaa iminka waxa ay hogaanka horyaalka ku hogaamineysaa 76 dhibcood,halka kooxda Chelsea ay iyana ku jirto kaalinta labaad, waxa ayna leedahay 70 dhibcood.
Dhinaca kale kooxda Stock City ayaa 3-1 uga adgaatay kooxda taraanturada ka bixi la, ee Arsenak,marki ay ku marti gelisay gurigeeda ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Ingiriiska.
Kooxda Stock City waxaa seddexda gool u kala saxiixay laacibiinta kala ah K. Jones, J. Pennant iyo Jon Walters,kooxda Gunners iyana waxaa u dhaliyey goolkii daciifka ahaa laacibka reer Netherland ee Robin Van Persie.
Dhinaca la-ligaha Spain, kooxda Barcelona ayaa 2-0 ku garbaashtay naadiga Espanyol oo ay ku marti gelisay gurigeeda, waxaana Barcelona goolasha u kala saxiixay Andrés Iniesta iyo Gerard Piquc.